‘Dananai Nemabasa Nechokwadi’—1 Johani 3:18 | Yokudzidza
Kuita Zvaunoudzwa naJehovha Kunounza Makomborero
ChiSutu (South Africa)
Mutauro Wemasaini wokuItaly
“Ngatiregei kudanana neshoko kana norurimi, asi nemabasa nechokwadi.”​—1 JOH. 3:18.
NZIYO: 106, 100
Nderupi rudo runonyanya kukosha?
“Rudo rusina unyengeri” rwakaita sei?
Zvii zvatingaita kuti rudo rwedu ruve rwechokwadi?
1. Nderupi rudo runonyanya kukosha, uye nei zvakadaro? (Ona mufananidzo uri panotangira nyaya ino.)
RUDO runonzi a·gaʹpe, chipo chinobva kuna Jehovha. Runobva pachokwadi chakarurama chisingachinji. Jehovha ndiye tsime rerudo irworwo. (1 Joh. 4:7) Rudo irworwo ndirwo runonyanya kukosha. Kunyange zvazvo rudo urwu ruchisanganisira kufarira munhu uye kuratidza ushamwari, runonyanya kuoneka nekuitira vamwe zvakanaka pasina udyire. Rimwe bhuku rinoti rudo runonzi a·gaʹpe “runogona kungozivikanwa nezviito zvinobva paruri.” Patinoratidza vamwe rudo rusina udyire kana kuti vamwe pavanotiratidza rudo rwakadaro, zvinoita kuti upenyu hwedu hufadze.
2, 3. Jehovha akaratidza sei kuti anoda vanhu zvisina udyire?
2 Jehovha akaratidza kuti anoda vanhu asati atombosika Adhamu naEvha. Akasika nyika kuti ive musha wevanhu nekusingaperi, nzvimbo yekuti vararame vachinakidzwa neupenyu zvizere. Jehovha akaita izvi kuti zvinakire isu kwete iye. Akaratidzawo rudo rusina udyire kuburikidza nekukomborera vana vake vepanyika kuti vave netariro yekurarama nekusingaperi muParadhiso yaainge avagadzirira.
3 Adhamu naEvha pavakapanduka, Jehovha akaratidza rudo rwake rusina udyire nenzira yakakura chaizvo. Akaronga kudzikinura vana vaizoberekwa nevapanduki vaviri ivavo, aine chokwadi chekuti vamwe vevana ivavo vaizoonga rudo rwake. (Gen. 3:15; 1 Joh. 4:10) Jehovha paakavimbisa kuti paizouya Mununuri, aitoona sekuti chibayiro ichi chainge chatopiwa. Papera makore 4 000, Jehovha akazvipira chaizvo paakapa Mwanakomana wake akaberekwa ari ega sechibayiro achiitira vanhu. (Joh. 3:16) Tinoonga chaizvo rudo rwaJehovha rusina udyire.
4. Chii chinoratidza kuti vanhu vane chivi vanokwanisa kuratidza rudo rusina udyire?
4 Tinokwanisa kuratidza rudo rusina udyire nekuti Jehovha akatisika nemufananidzo wake. Chivi chatakaberekwa nacho chinoita kuti zvisava nyore kuti tiratidze rudo, asi hachititadzisi kururatidza. Abheri akaratidza kuti aida Mwari paakapa zvinhu zvakanakisisa zvaaiva nazvo asina udyire. (Gen. 4:3, 4) Noa akaratidza rudo rusina udyire kuvavakidzani vake nekuvaparidzira mashoko aMwari kwemakumi emakore pasinei nekuti vanhu vacho vaisateerera. (2 Pet. 2:5) Abrahamu akakoshesa kuda kwaaiita Jehovha kudarika manzwiro ake paakarayirwa kupa mwanakomana wake sechibayiro. (Jak. 2:21) Kufanana nevarume ivavo vainge vakatendeka, tinoda kuratidza rudo pasinei nematambudziko atinosangana nawo.
RUDO CHAIRWO UYE RWEKUNYEPERA
5. Tingaratidza rudo chairwo munzira dzipi?
5 Bhaibheri rinotsanangura kuti rudo chairwo runoratidzwa, kwete “neshoko kana norurimi, asi nemabasa nechokwadi.” (1 Joh. 3:18) Izvi zvinoreva here kuti hatikwanisi kuratidza rudo nezvatinotaura? Aiwa. (1 VaT. 4:18) Zvinoreva kuti rudo rwedu harufaniri kungogumira pakutaura chete, kunyanya kana mamiriro ezvinhu achida kuti tiite chimwe chinhu. Semuenzaniso, kana mumwe muKristu achishayiwa zvinhu zvekurarama nazvo, hatifaniri kungoperera pakumushuwira zvakanaka. (Jak. 2:15, 16) Saizvozvowo, kuda kwatinoita Jehovha nemuvakidzani kunoita kuti tisangoperera pakukumbira Jehovha kuti ‘atumire vashandi mubasa rekukohwa’ asi kunoitawo kuti tinyatsoita basa rekuparidza.​—Mat. 9:38.
6, 7. (a) “Rudo rusina unyengeri” rwakaita sei? (b) Ndeipi mimwe mienzaniso yerudo rwekunyepera?
6 Muapostora Johani akanyora kuti tinofanira kudanana “nemabasa nechokwadi.” Saka rudo rwedu runofanira kunge “rusina unyengeri.” (VaR. 12:9; 2 VaK. 6:6) Izvi zvinoreva kuti hatikwanisi kuratidza rudo chairwo asi tichinyepedzera kuva zvatisiri. Tingabvunza kuti, ‘Kune chinhu chinonzi rudo rune unyengeri here?’ Aiwa hazvina kudaro. Irworwo harusi rudo zvachose asi kungonyepedzera.
7 Ona mimwe mienzaniso yerudo rwekunyepera. Mumunda weEdheni, Satani akaita sekuti aida kuita zvakanakira Evha, asi maitiro ake aiva eudyire uye eunyengeri. (Gen. 3:4, 5) Mumazuva aDhavhidhi, Ahitoferi akaratidza kuti ushamwari hwake namambo hwaiva hweunyengeri. Paakaona sekuti aigona kuwana zvimwe zvinhu, Ahitoferi akapanduka. (2 Sam. 15:31) Sezviri kuitikawo mazuva ano, vaya vanotsauka pakutenda kana vaya vanoita kuti muungano muve nemapoka vanoshandisa “kutaura kunonyengera nokutaura kwokurumbidza” kuti vaite sekuti vanoda vanhu, asi vavariro yavo chaiyo ndeyeudyire.​—VaR. 16:17, 18.
8. Tinofanira kuzvibvunza mubvunzo upi?
8 Rudo rune unyengeri rwakaipa chaizvo nekuti kunenge kuri kunyepedzera kuva nerudo rwekuzvipira runobva kuna Mwari. Vanhu vangasaona unyengeri ihwohwo, asi Jehovha anohuona. Jesu akatotaura kuti vaya vakaita sevanyengeri vacharangwa “zvakaoma kwazvo.” (Mat. 24:51) Vashumiri vaJehovha havangambodi kuratidza rudo rune unyengeri. Asi zvakanaka kuzvibvunza kuti, ‘Ndinogara ndichiratidza rudo chairwo here, rusina kukanganiswa neudyire kana neunyengeri?’ Ngatikurukurei nzira 9 dzatingaedza nadzo kuratidza rudo “rusina unyengeri.”
RUDO RUNGARATIDZWA SEI “NEMABASA NECHOKWADI”?
9. Rudo chairwo ruchaita kuti tiite sei?
9 Gutsikana nekuita basa rako pasina anozviziva. Pese pazvinoita, tinofanira kuva nechido chekuita mabasa anoratidza kuti tinoda hama dzedu “pakavanda,” kana kuti tisingazviitiri kuonekwa nevanhu. (Verenga Mateu 6:1-4.) Ananiyasi naSafira vakatadza kuita izvozvo pavakapa chipo. Vaida kuti vamwe vazive nezvazvo, ndokunyepa kuti vapa mari yese yemunda uye vakabva varangwa nemhaka yeunyengeri hwavo. (Mab. 5:1-10) Kusiyana naizvozvo rudo chairwo runoita kuti tifarire kushumira hama dzedu tisingaitiri kuonekwa. Semuenzaniso, hama dzinobatsira Dare Rinotungamirira pakugadzira zvekudya zvekunamata hadziiti kuti vamwe vazive kuti ndiwo mabasa adzinoita, kana kuzivisa zvinhu zvadzakashanda pazviri.
10. Tingava sei pamberi pakukudza vamwe?
10 Iva pamberi pakukudza vamwe. (Verenga VaRoma 12:10.) Jesu akaratidza muenzaniso wekukudza vamwe kuburikidza nekuita basa rakaderera chaizvo. (Joh. 13:3-5, 12-15) Pamwe tingatofanira kushanda nesimba kuti tizvininipise kuitira kuti tikudze vamwe saizvozvo. Kunyange vaapostora vaisanyatsonzwisisa zvaiitwa naJesu kusvikira vagamuchira mweya mutsvene. (Joh. 13:7) Tinogona kukudza vamwe kuburikidza nekusanyanya kufunga nezvedu pachedu nemhaka yedzidzo yedu, zvatiinazvo, kana zvatinoita pakushumira Jehovha. (VaR. 12:3) Uyewo, pane kuti tiitire shanje vaya vanenge varumbidzwa, tinofanira kufara pamwe chete navo kunyange zvazvo tichifunga kuti tinofanira kurumbidzwawo zvakafanana nemhaka yekuti tine zvatakaitawo pabasa racho.
11. Nei tichifanira kurumbidza vamwe nemwoyo wese?
11 Rumbidza hama dzako nemwoyo wese. Tinofanira kushandisa mikana yatinowana yekuti tirumbidze vamwe nekuti kuita izvozvo ‘kunovaka.’ (VaEf. 4:29) Asi tinofanira kuzviita nemwoyo wese. Tikasadaro, tinogona kunge tichitobata mumwe munhu kumeso kana kuti tinenge tisiri kuita basa redu rekutsiura patinenge tichifanira kudaro. (Zvir. 29:5) Kana tikarumbidza munhu asi tozomutsoropodza asipo tinenge tichitonyengera. Muapostora Pauro akadzivisa kuita izvozvo uye akava muenzaniso wakanaka wekuratidza rudo chairwo paairumbidza vamwe. Semuenzaniso, akarumbidza nemwoyo wese vaKristu vaiva muKorinde pane zvimwe zvinhu zvavaiita. (1 VaK. 11:2) Asi pavakaita zvinhu zvaisakodzera kurumbidzwa, akavatsanangurira chikonzero chacho nemutsa uye zvakajeka.​—1 VaK. 11:20-22.
Imwe nzira yekuratidza rudo uye kugamuchira vamwe zvakanaka ndeyekubatsira hama dzedu dzinoshayiwa (Ona ndima 12)
12. Tingaratidza sei rudo chairwo patinogamuchira vamwe?
12 Gamuchira vamwe zvakanaka. Jehovha anotirayira kuti tive nerupo kuhama nehanzvadzi dzedu. (Verenga 1 Johani 3:17.) Asi tinofanira kuita izvozvo nevavariro yakanaka, tichidzivisa kuita chero chinhu chingaratidza kuti tine udyire. Tinogona kuzvibvunza kuti: ‘Ndinonyanya kukoka shamwari dzangu dzepedyo, vanhu vane mukurumbira, kana vaya vangazondiitirawo chimwe chinhu here? Kana kuti ndinotsvaga nzira dzekuti ndive nerupo kuhama nehanzvadzi dzandisinganyatsozivi kana kuti dzisina zvadzingazondiitirawo here?’ (Ruka 14:12-14) Kana kuti zvichida mumwe muKristu ari kushayiwa nemhaka yekutadza kuronga zvakanaka kana kuti anorega kutitenda nezvatakamuitira. Pakadaro, tinofanira kushandisa zano rekuti: “Gamuchiranai zvakanaka musinganyunyuti.” (1 Pet. 4:9) Kana ukashandisa zano iri, uchawana mufaro unobva mukupa uine vavariro yakanaka.​—Mab. 20:35.
13. (a) Ndepapi pazvingaoma kubatsira vaya vasina simba? (b) Zvii zvatingaita kuti titsigire vasina simba?
13 Tsigira vasina simba. Murayiro weBhaibheri wekuti “tsigirai vasina simba, itirai mwoyo murefu vanhu vose,” unogona kubudisa pachena kuti rudo rwedu nderwechokwadi here kana kuti kwete. (1 VaT. 5:14) Kunyange zvazvo vakawanda vevasina simba vachizosimba mukutenda, vamwe vacho tinofanira kuramba tichivabatsira nemwoyo murefu. Izvi zvinogona kusanganisira kukurukura pfungwa dzinovaka dzemuMagwaro, kuvakumbira kuti tishande tese muushumiri kana kungowana nguva yekuvateerera. Uyewo, pane kungofunga kuti hama kana hanzvadzi ‘yakasimba’ kana kuti ‘haina kusimba,’ tinofanira kuziva kuti tese tine patakasimba nepatisina kusimba. Kunyange muapostora Pauro akabvuma kuti aiva nepaasina kusimba. (2 VaK. 12:9, 10) Saka tese tinogona kubatsirwa nerutsigiro rwevamwe vaKristu.
14. Tinofanira kuitei kuti tirambe tiine rugare nehama dzedu?
14 Ita kuti pave nerugare. Tinoita zvese zvatinogona kuti tive nerugare nehama dzedu, kunyange patinoona sekuti hadzina kutinzwisisa kana kutibata zvakanaka. (Verenga VaRoma 12:17, 18.) Kukumbira ruregerero kunogona kubatsira kuti munhu asaramba achirwadziwa, asi kunofanira kuitwa zvichibva pamwoyo. Semuenzaniso, pane kungoti, “Ndine urombo kuti uri kunzwa saizvozvo,” unogona kubvuma zvawakakanganisa uchitaura kuti, “Ndine urombo kuti ndakakurwadzisa nezvandakataura.” Rugare runotonyanya kukosha muwanano. Murume nemudzimai havafaniri kunyepera kudanana pane vanhu asi kana vari vega vachirwadzisana kuburikidza nekunyararirana, kuudzana magaramwoyo, kana kurovana.
15. Tingaratidza sei kuti kukanganwira kwedu ndekwechokwadi?
15 Kanganwira nemwoyo wese. Kana munhu akatitadzira tinomukanganwira, torega kuramba takamugumbukira. Tinokanganwira nemwoyo wese vaya vangave vasiri kuziva kuti vakatitadzira kuburikidza ‘nekushivirirana murudo, tichivavarira nemwoyo wese kuchengeta kubatana kwemweya muchisungo cherugare.’ (VaEf. 4:2, 3) Kuti tikanganwire vamwe zvechokwadi, tinofanira kudzora mafungiro edu kuitira kuti ‘tisachengeta mafi.’ (1 VaK. 13:4, 5) Kana tikachengeta chigumbu tinogona kukanganisa zvachose ushamwari hwedu nehama kana hanzvadzi yedu uyewo naJehovha. (Mat. 6:14, 15) Tinogonawo kuratidza kukanganwira nemwoyo wese vaya vanotitadzira kuburikidza nekuvanyengeterera.​—Ruka 6:27, 28.
16. Tinofanira kuona sei ropafadzo dzatiinadzo mubasa raJehovha?
16 Rega zvimwe zvinhu zvakakunakira. Kana tikava neropafadzo mubasa raJehovha, tinofanira kudziona semikana yekuratidza kuti rudo rwedu nderwechokwadi kuburikidza ‘nekutsvaga kwete zvedu tega, asi zvemumwe munhu.’ (1 VaK. 10:24) Semuenzaniso, pamagungano edu, vamwe vese vasati vapinda, varindiri vanenge vatotanga basa munzvimbo inogara vanhu. Pane kuti vaone basa ravo semukana wekuti ivo nemhuri dzavo vawane pekugara pakanaka, vakawanda vehama idzi vanosarudza kugara munzvimbo dzisingafarirwi nevakawanda kwavanenge vachishandira. Pavanorega kungofunga zvakavanakira, vanenge vachiratidza rudo rusina kana kaudyire. Ungatevedzera sei muenzaniso wavo wakanaka?
17. Rudo chairwo ruchatuma munhu anenge aita chivi chakakura kuti aite sei?
17 Reurura, worega kuita zvivi pachivande. Vamwe vaKristu vanoedza kuvanza chivi chakakura chavakaita vachiitira kuti vasanyadziswa kana kurwadzisa vamwe. (Zvir. 28:13) Asi kuita izvozvo hakusi kuratidza rudo, nekuti hakungokuvadzi mutadzi chete asiwo vamwe. Kunogona kuita kuti Jehovha asakomborere ungano nemweya wake mutsvene uye ungano inoshaya rugare. (VaEf. 4:30) Rudo chairwo runoita kuti muKristu anenge aita chivi chakakura ataure nevakuru kuitira kuti vamubatsire.​—Jak. 5:14, 15.
18. Rudo chairwo runokosha zvakadini?
18 Rudo ndirwo rwakakura kupfuura humwe unhu hwese. (1 VaK. 13:13) Runoita kuti zvive pachena kuti tiri vateveri vaJesu uye kuti tiri vatevedzeri vaJehovha, Tsime rerudo. (VaEf. 5:1, 2) Pauro akanyora kuti: “Kana . . . ndisina rudo, handisi chinhu.” (1 VaK. 13:2) Ngatirambei tichiratidzawo rudo rwedu “nemabasa nechokwadi” kwete “neshoko” chete.